Ibsi ODPn har’a laate maalirratti xiyyeeffata? – Fana Broadcasting Corporate
Ibsi ODPn har’a laate maalirratti xiyyeeffata?
Finfinnee, Muddee 17,2011(FBC)- Itti gaafatamaan ijaarsa siyaasa baadiyyaa ODP obbo Addisuu Araggaan ibsa laataniin;
ODPn tarkaanfii dirree siyaasaa ballisuuf fudhachuu eegale cimsee kan itti fufu ta’uu,
Aadaa siyaasaa duubatti hafaa keessa tureen jaarmiyaaleen miidhaa hedduu walirraan gahaa, sabas rakkina keessatti kuffisaa turuu kaasan.
Garaagarummaa ilaalcha siyaasaatiin;
•Siyaasa tumsaa mannaa morkii,
Biyya demokraasiin keessatti hin dagaagnee fi waliin kuufuutti nu geessee jira jedhan.
ODP fi mootummaan paartichaan hogganamu demokraasiin dhugaa akka biyya kanatti babal’atu tarkaanfiiwwan jajjabaa fi seena qabeessa fudhatee jira, fudhachaas jira jedhaniiru.
• Dhiifamaan hiikamuu sirreeffatoota seeraa
•Dhaabbileen siyaasaa qabsoo hidhannoo geggeessuuf dirqamanii turan garabiyyatti kabajaan akka deebi’an,
•Seerota gufachiisoo demokraasii ta’an (Labsii farra shorokeessummaa, dhaabbilee miti mootummaa, miidiyaa…)
•Qaamota dhiittaa mirga dhala namoomaa irratti raawwataa turan irratti tarkaanfii ol’aantummaa seeraa kabajichiisuu
•Riiformii dhaabbilee demokraasii (boordii filannoo) hojjeteera; hojjechaa jira.
Jaarmiyaalee siyaasaa qabsoo hidhannoo geggeessaa turan waliin qabsoo karaa nagaa qofaan geggeessuuf waliigalteerra gahamee jira jedhan.
#Waliigalteen kun maali?
•Qabsoo karaa nagaa fi karaa nagaa qofa geggeessuu (qabsoon hidhannoo hin jiru, hin barbaachisu.
•Siyaasa morkii fi walkuffisanii darbuu keessa bahauun walgargaaruu, walutubuun cehumsa gara dimokraasiitti godhamu ariifachiisudha)
•Seera heera biyyattii kabajanii qabsaa’uu
•Carraan hidhattootaa maalta’a (leenjii fudhatanii akkaataa fedhii fi dandeettii isaanitiin mootummaan hojiitti akka bobbaasu ta’uu obbo Addisuun ibsaniiru.)
Qormaata dirree dimokraasii bal’isuuf taasifamaa jiru maaltu gufachiisaa jira kan jedhurratti;
•ABOn akkaataa waliigaltee galameetiin ariitidhaan qabsoo karaa nagaatti guutumaa guutuutti deebi’uu dhabuu,
FKN:-Waranni Ertiraa ture biyya galee guyyota 15 keessatti kan hafe galchuuf waliigalamee ture.
•Loltuu haaraa fo’achuun leenjisuun waliigalticha gufachiisaa jira jedhaniiru.
Ajjeechaa hoggansaa fi namoota dhuunfaa,
Caasaa mootummaa diiguu,
Saamicha baankii fi mannen hojii mootummaa,
Karaa cufuu, hojii mootummaa fi dhuunfaa danquu,
Milishaa meeshaa hikkachiisuu (Buufata poolisii cabsuun meeshaa saamuu fi dhimmota kkf kaasaniiru.)
Dubbii kana ODP fi mootummaan naannoo Oromiyaa obsaan ilaalaa turee jira jedhan itti gaafatamtichi.
Hoggansi ABO waliiin yeroo yerootti mariyachuun koree waloo dhaabee waliin socho’aa turree jirra. Ammas socho’aa jirra jedhan.
Qabsoo karaa nagaa geggeeuuf kutannoo dhabuu,
Gidduu isaaniitti waliigalteen dhimmichairratti gahamuu dhabuu, (Ibsa miidiyaa ONN iratti miseensotnii fi miseensonni gumii shanee kennan, ibsa hogganaan waraanaa Zoonii Lixaa miidiyaa hawaa irratt gad lakkise gargar ta’uu kaasaniiru.)
Hoggansi ABO; waan mariidhaan irratti waliigallu hojiitti hiikuu dadhabuu (waldhageettii fi walii abbomamuun isaan gidduu jiru laafaa ta’uu),
Kanarraa kanka’e dubbiin,
Sababoota xixiqqaa akka haal dureetti kaa’uu, (Abaluun maaliif muudame? Waraana Eertiraadhaa gale Ardaayitaa dhaqnee ilaaluu qabna, Waajjira Gullallee naannoo biraatii waraanni hin hiikkanne, humni waraanaa maalif gara bahaa deemee kaasu jedhaniiru obbo Addisuu Araggaan.
Wanti waliin dubbatamu hojiitti hiikamaa hin jiru jedhaniiru itti gaafatamtichi.
Gara fuula duraatti;(waraanaan ol’aantummaa siyaasaa mirkaneeffanna jennee hin amannu jedhan ibsichaan.)
Walii galtee keenya ni kabajna (karoora waloon baafanne irratti hundoofnee WBO simannee leenjisuuf qophii hunda xumurre jirra jedhaniiru.
WBO keessaa dhuunfaa fi gareedhan namootni qabsoo karaa nagaatu nu baasa jedhanii ejjennoo fudhtaa jiran 112 ol (Shawaa Kaabaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Iluu Abbaa Booraa) simannee ofitti qabnee leenjifnee hojiitti bobbaasuuf qophiidha jedhaniiru.
Dirree dimokraasii bal’isuuf tarkaanfii fudhachuu eegale cimsee itti fufa.
Waliigaltee paartiilee siyaasaa waliin gale naamusa cimaadhan hojiirra oolchuu itti fufa,
Qawween siyaasa giduudhaa akka bahu, aadaan siyaasaa duubatti hafaan jijjiiramee,
Ol’aantummaa seeraa kabachiisuun injifannoo wareegama dhalootaatiin argame ni tiksa jedhan.
Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee baajatni bara 2012 Birrii biiliyoona 47.6…
Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI manneen waliin jireenyaa 112 carraadhan…
Yuunvarsiitiin Niiwkaastil Dooktar Teediroos Adihaanoomif Dooktareeta Kabajaa laate
Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsiitti namichi biqiltuu Ganna baranaa dhaabaman 177…
Hoggansi Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI haala waqtaawaa fi…
MM Dr Abiy Ahimad badhaasa Chaataam Haawus 2019f kaadhimaman
Ityoophiyaan gulaallii waancaa Afrikaa 2021n morkattoota…
Jeequmsa magaalaa Hawaasaa mudate tasgabbeessuf hoojjetamaa…